Soie ဗာဂျင်းဆံပင် Extensions: ဘရာဇီးပီရူး, အိန္ဒိယ, & Mink Soie ဗာဂျင်းဆံပင် Extensions
Soie ဗာဂျင်းဆံပင် Extensions: ဘရာဇီးပီရူး, အိန္ဒိယ, & Mink
ဆံပင်ရွှေရောင် Bombshell စုစည်းမှု
ကုန်ကြမ်းအိန္ဒိယ / Mink ဆံပင် Extensions
Giveaway & ယှဉ်ပြိုင်ပွဲ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေး ယူရို ဗြိတိန်ပေါင် Sterling ကနေဒါဒေါ်လာ သြစတြေးလျဒေါ်လာ အစ္စရေးနယူးအကျပ် အိန္ဒိယရူပီး အာဖဂန်အာဖဂန် အဘိဓါန် Albanian Lek Azerbaijani အဘိဓါန် Manat အယ်လ်ဂျီးရီးယား Dinar အင်ဂိုလာ Kwanza အာဂျင်တီးနားပီဆို Armenian အဘိဓါန် DRAM Aruban Florin Bahamian ဒေါ်လာစျေး ဘာရိန်း Dinar ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် Taka Barbadian ဒေါ်လာစျေး ဘီလာရုရူဘယ် ဘေလီဇ်ဒေါ်လာ Bermudan ဒေါ်လာစျေး ဘူတန် Ngultrum ဘိုလီးဗီးယား Boliviano ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား Convertible မာကု Botswanan Pula ဘရာဇီးရီးရဲလ် ဘရူနိုင်းဒေါ်လာ ဘူဂေးရီးယား Lev Burundian ဖရန့် ကမ္ဘောဒီးယား Riel ကိတ်ဗာဒီအန် Escudo ဗဟိုအာဖရိက CFA ဖရန့် CFA ဖရန့် BCEAO CFP ဖရန့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ Koruna ကေမန်ကျွန်းစုဒေါ်လာ ချီလီပီဆို တရုတ်ယွမ် ကိုလံဘီယာပီဆို Comorian ဖရန့် ကွန်ဂိုဖရန့် ကိုစ်တာရီကန် Colon ခရိုအရှေ Kuna ကျူးဘား Convertible ပီဆို ကျူးဘားပီဆို ဒိန်းမတ်ခရိုဏာ Djiboutian ဖရန့် ဒိုမီနီကန်ပီဆို အရှေ့ကရစ်ဘီယံဒေါ်လာ အီဂျစ်ပေါင် အီရီထရီးယား Nakfa အဲသယောပိ Birr ဖောက်ကလန်ကျွန်းစုပေါင် ဖီဒေါ်လာစျေး Gambian Dalasi ဂျြောဂြီယနျ Lari ဂါနာလူမျိုး Cedi ဂျီဘရောလ်ပေါင် ရွှေအောင်စ ဂွာတီမာလာ Quetzal ဂါဇီးပေါင် ဂီနီဖရန့် Guyanaese ဒေါ်လာစျေး အီသခွားသီး ဟွန်ဒူးရပ်စ် Lempira ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ဟနျဂရေီ Forint လန် Krona IMF ကအထူး Drawing ခငြ့်အရေး အင်ဒိုနီးရှားရူပီယာ အီရန် Rial အီရတ် Dinar က Man ပေါင်၏ကျွန်း ဂျမေကာဒေါ်လာစျေး ဂျပန်ယန်း ဂျာစီပေါင် ဂျော်ဒန် Dinar ကာဇက်စတန် Teng ကင်ညာရှီလင် ကူဝိတ် Dinar Kyrgystani Som လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ် Kip အံ Lats လက်ဘနွန်ပေါင် လီဆိုသို Loti လိုက်ဘေးရီးယားဒေါ်လာ လစ်ဗျား Dinar အာနီယံ Litas Macanese အဘိဓါန် Pataca စီဒိုနီယံ Denar အာလာဂါစီ Ariary မာလာဝီ Kwacha မလေးရှားရင်းဂစ် Maldivian Rufiyaa Mauritanian Ouguiya Mauritian ရူပီး မက္ကဆီကန်ပီဆို မော်လ်ဒိုဗာ Leu လီး Tugrik အဘိဓါန် Moroccan Dirham မိုဇမ်ဘစ် Metical မြန်မာကျပ်ငွေ နမ်မီးဘီးယားဒေါ်လာ နီပေါရူပီး နယ်သာလန် Antillean Guilder နယူးထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ နီကာရာဂွါ Cordoba နိုင်ဂျီးရီးယား Naira မြောက်ကိုရီးယား Won နော်ဝေခရိုနာ ကလည်းအိုမန် Rial ပါကစ္စတန်ရူပီး ပနားမား Balboa ပါပူဝါနယူးဂီနီ Kina ပါရာဂွေးဂူအာရာနီ ပီရူး Nuevo Sol ဖိလစ်ပိုင်ပီဆို ပိုလနျ Zloty ကာတာ Rial ရိုမေးနီးယား Leu ရုရှားရူဘယ် ရဝမ်ဒါဖရန့် စိန့်ဟယ်လီနာပေါင် Samoan အဘိဓါန် Tala စဝ်တုန်နှင့်ပရ Dobra ဆာလ်ဗေးဒိုး Colon ဆော်ဒီ Riyal ဆားဗီး Dinar Seychellois ရူပီး Sierra Leonean Leone Silver, အောင်စ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ဆော်လမွန်ကျွန်းစုဒေါ်လာ ဆိုမာလီရှီလင် တောင်အာဖရိက Rand တောင်ကိုရီးယား Won သီရိလင်္ကာရူပီး ဆူဒန်ပေါင် Surinamese ဒေါ်လာစျေး Swazi Lilangeni ဆွီဒင်ခရိုနာ ဆွစ်ဖရန့် ဆီးရီးယားပေါင် Tajikistani Somoni တန်ဇန်းနီးယားရှီလင် ထိုင်းဘတ်ငွေ တှနျဂါ Pa'anga ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုဒေါ်လာစျေး တူနီးရှား Dinar Turkmenistani Manat တူရကီလိုင်ရာ ယူဂန်ဒါရှီလင် ယူကရိန်း Hryvnia အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု Dirham ဥရုဂွေးပီဆို ဥဇဘက် Som ဗာနူအာ Vatu ဗင်နီဇွဲလား Bolivar ဗီယက်နမ်ဒေါင် ယီမင် Rial ဇမျဘီယာ Kwacha
Azerbaijani အဘိဓါန် Manat
ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား Convertible မာကု
ကျူးဘား Convertible ပီဆို
IMF ကအထူး Drawing ခငြ့်အရေး
က Man ပေါင်၏ကျွန်း
Macanese အဘိဓါန် Pataca
Samoan အဘိဓါန် Tala
ထွက်ရန်မှာ "IAMBEAUTY" Code ကိုအတူတစ်ခုချင်းစီကိုဆံပင် Item Offf $ 10!
Soie ဗာဂျင်းဆံပင် Extensions
အဘယ်ကြောင့် Soie ဗာဂျင်းဆံပင်?
အတ္တလန်တာအခြေစိုက် Soie ဗာဂျင်းဆံပင် Extensions ထိပ်တန်းအရည်အသွေး 10A ပေးပေါ်နှင့်ဆံပင်အထုပ်အထက်တွင်သူ့ဟာသူ prides ။ ထိုကဲ့သို့သောဂလော်ဒီယာယော်ဒန်မြစ်, ဂျက်စီကာဖြူ, Lola မွန်ရိုးနှင့် Annie Llohzeh အဖြစ်နာမည်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကညာဆံပင် extensions တွေကိုဝတ်ဆင် နှင့်မကြာခဏသူတို့ကိုမြှင့်တင်ရန်။ ကျနော်တို့ရောင်းချ ဘရာဇီး, ပီရူး, ကုန်ကြမ်းအိန္ဒိယ, Minkနှင့် သဘာဝဆံပင် extension များ.
ထူးချွန်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်ရုံထုတ်ကုန်ထက်ပိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆံပင် & အလှတရားကျွမ်းကျင်သူများကဆံပင်အကြောင်းသင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ကိုချစ်။ သငျသညျကိုယျအဘို့မဝယ်သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ကိုကူညီနိုင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆံပင်တော့အရောင်းကုမ္ပဏီစတင်ဖွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက္ကားနှင့်လက်လီစျေးနှုန်းများသင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆံပင် 100% ကညာလူ့ဆံပင်နှင့်လျော်သောစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းကြာရှည်ဦးမည်အာမခံပါသည်။
ဒီနည်းကိုအပတ်'S TOP SELLER'S
ဘရာဇီး Blonde လမျးဖွောငျ့ဗာဂျင်းဆံပင် Extensions
ဘရာဇီးခန္ဓာကိုယ် Wave ကိုဗာဂျင်းဆံပင် Extensions
ဆံပင်ရွှေရောင် Bombshell ဗာဂျင်းဆံပင် Extensions
ကုန်ကြမ်းအိန္ဒိယ & Mink ဗာဂျင်းဆံပင် Extensions
သဘာဝ Kinky curly လူ့ဆံပင်ပိတ်သိမ်း
သဘာဝ Kinky curly Clip-ခုနှစ်တွင်လူ့ဆံပင် Extensions
သဘာဝ Kinky curly လူ့ဆံပင် Extensions
သဘာဝအာဖရိက Kinky လူ့ဆံပင်ပိတ်သိမ်း
အသားပေးကုန်ကြမ်းအိန္ဒိယ & Mink ဆံပင် Extensions
ကုန်ကြမ်းအိန္ဒိယ / Mink လမျးဖွောငျ့ဗာဂျင်းလူ့ဆံပင် Extensions
ကုန်ကြမ်းအိန္ဒိယ / Mink သဘာဝဆံပင်ကောက်ကောက်ဗာဂျင်းလူ့ဆံပင် Extensions
ကုန်ကြမ်းအိန္ဒိယ / Mink လမျးဖွောငျ့ Blonde ဗာဂျင်းလူ့ဆံပင် Extensions
ကုန်ကြမ်းအိန္ဒိယ / Mink လမျးဖွောငျ့ဗာဂျင်းလူ့ဆံပင်ပိတ်သိမ်း
အသားပေး Blonde ဗာဂျင်းဆံပင် Extensions
ဘရာဇီး Blonde ခန္ဓာကိုယ် Wave ကိုဗာဂျင်းဆံပင် Extensions
ဘရာဇီးလမျးဖွောငျ့ဗာဂျင်း Blonde ဆံပင်တိုကျရိုကျ
Instagram ကိုတွင် @SoieHair Follow
Awesome ကိုဆံပင်။ ဒါဟာဆံပင်တို့သည်ကြီးစွာသောအရည်အသွေးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ငါကချက်ချင်းကြောင့်ဆိုးသောဝယ်ယူသည့်အခါ soft ။ ငါကပျော့ပြောင်းပြီးဖွင့်ပြောရဲ။ ချစ်နေမိတယ်။ ငါ3လက်မကလစ် ins ၏ 18 အထုပ်ဝယ်ယူပြီးတော့ပျော်ရွှင်ဖြစ်နိုင်ဘူး !!! ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ငါသည်အလျင်အမြန်ငါ့ဆံပင်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ကြီးမြတ်ရလဒ်များကိုအခါတိုင်းထုတ်လုပ်သွားရဲ့ဂရိတ်အရည်အသွေးကို။ ကြှနျတေျာ့အမြိုးသမီးသူငယ်ချင်းအနည်းငယ်ဆံပင်နှင့်ဆိုက်နှင့်အလွန်သဘောကျခဲ့ကြပြီ။ Soie ဆံပင် Extensions တို့သည်ကြီးစွာသောဆံပင်ထုတ်ကုန်တွေနဲ့အတူသွားကြဖို့အလွန်ကြီးစွာသောဝန်ဆောင်မှုရှိပါတယ်!
ဒီအစဉ်အဆက်အများဆုံးအပြည့်အဝ, တာရှည်တည်မြဲခြင်းနှင့်အလှဆုံးဆံပင်ပါ! အရည်အသွေးထူးချွန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ 2,000 ထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်ဖောက်သည်များ၏ SOIE ဆံ Doll မိသားစု join ။
ဆံပင် Extensions Store မှာ Navigation
Soie ဆံပင် Extensions ဆက်သွယ်ခြင်း
အားလုံးဆံပင် Extensions & ထုတ်ကုန်များ
© 2019 Soie ဗာဂျင်းဆံပင် Extensions
$ 10 OFF တိုင်းဆံပင်အိတ်စတန်းရှင်း!
သင့်ရဲ့လှည်းစီဆံပင် extension ကိုချွတ် $ 10 ဘို့ငါတို့သတင်းလွှာမှ Subscribe!